Goobaha dalxiiska ee Maraykanka oo leh kharashka ugu qaalisan ee baarkinka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Goobaha dalxiiska ee Maraykanka oo leh kharashka ugu qaalisan ee baarkinka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Shopping • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dhigashada meelo badan oo Maraykan ah oo soo jiidasho leh waxay ku dambayn kartaa kharashka booqdayaasha in ka badan intii la filayay.
Marka aan qorsheyneyno safarka waddooyinka ee dalka oo dhan waxaan ka fikirnaa shidaal, hoteello, cunto, alaab xusuus ah… laakiin mararka qaarkood way fududahay in la iloobo kharashyada lama filaanka ah.
Haddi aad fasax ku maqan tahay dalka dibaddiisa ama aad fasax u tahay gurigaaga, kharashyadu si degdeg ah ayay isu kordhin karaan. Kahor intaadan ogaanin, waxaad ku dhamaan kartaa inaad boqolaal doolar ku kharash garayso kharashaadka la yaabka leh sida tigidhada gaadiidka, hubinta shandadaha, iyo dhigashada gaadhigaaga.
Ku wadid wadista USA waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee loo safro oo lagu wareego.
Si kastaba ha ahaatee, waxay ku kici kartaa in ka badan inta aad filayso inaad dhigato dhigaalka qaar ka mid ah meelaha ugu sareeya ee gobolada.
Khubarada socdaalku waxay soo diyaariyeen liis ah kuwa ugu jaban, ugu qaalisan, iyo meelaha baabuurta la dhigto ee bilaashka ah, kuwaas oo muujinaya meelaha ugu habboon ee dalxiiska.
Baarkinnada soo jiidashada ee US ugu qaalisan
Rank soo jiidashada Qiimaha Dhigashada
1 Matxafka Magaalo Weyn ee Art $ 50.00
2 Hoolka Faneuil $ 43.00
4 Dalxiis Disneyland $ 30.00
6 Walt Disney Resort World Resort $ 25.00
7 Xarunta Getty $ 20.00
8 Xeebta Santa Monica $ 18.00
9 Ballaaran $ 17.00
11 La Brea Tar Godad $ 15.00
11 Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah ee Degmada Los Angeles $ 15.00
nasm wuxuu leeyahay,
Janaayo 14, 2022 markay tahay 23:53
Ma saacaddii baa mise saacaddii?